दशैंको मुखमा चीनले नेपालमाथि लगायो अघोषित नाकाबन्दी, किन मुकदर्शक बनेकाे छ ओली सरकार ? — Sanchar Kendra
दशैंको मुखमा चीनले नेपालमाथि लगायो अघोषित नाकाबन्दी, किन मुकदर्शक बनेकाे छ ओली सरकार ?
काठमाडौं । दशैँको मुखैमा छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । ९ महिनादेखि चीनको स्थलमार्गबाट हुने आयात ठप्प छ । यसले चीनमा निर्भर नेपाली बजारका कैयन मालवस्तुको आपूर्ति श्रृंखला भत्किएको छ भने ब्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म पीडित बन्ने अवस्था छ । बजारमा मागअनुसार मालसामान आपूर्ति नभएपछि मूल्यवृद्धि त भएकै छ, कतिपय समानको अभाव पनि देखिन थालेको छ । साथै चिनियाँ सामान आउन नपाउँदा भारतीय आयात फस्टाएको छ ।